Taliban: Naanị ndị mba ọzọ nwere ike isi na ọdụ ụgbọ elu Kabul pụọ na Afghanistan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Taliban: Naanị ndị mba ọzọ nwere ike isi na ọdụ ụgbọ elu Kabul pụọ na Afghanistan
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye na -ekwuchitere ndị Taliban bụ Zabiullah Mujahid
Ndị Taliban chọrọ ka ndị ọdịda anyanwụ kwụsị ịchụpụ ndị gụrụ akwụkwọ na Afghanistan, dịka ndị dọkịta na ndị injinia.
Ndị Taliban agaghị ekwe ka ndị Afghanistan si na ọdụ ụgbọ elu Kabul pụọ.
Ndị Taliban na -akụda ndị Afghanistan ịpụ na mba ahụ.
Ndị Taliban kwuru na ndị mba ọzọ niile ga -ahapụ Afghanistan ruo Ọgọst 31.
Onye na -ekwuchitere ndị Taliban Zabiullah Mujahid kwupụtara taa na ndị otu mgbagha Islam agaghịzi ekwe ka ndị Afghanistan banye n'ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai na mbo ịpụ na Afghanistan.
N'ikwu okwu n'ehihie Tuesday, ọnụ na -ekwuru ndị Taliban kwuru na ndị Taliban agaghịzi ekwe ka ndị Afghanistan pụọ na mba ahụ Ọdụ ụgbọ elu Kabul wee kpọkuo ọdịda anyanwụ ka ha ghara ịgba ndị gụrụ akwụkwọ ume ka ha gbalaga. Onye nkwuchite ọnụ ahụ rịọrọ ka ndị ike ọdịda anyanwụ kwụsị ịchụpụ ndị gụrụ akwụkwọ na Afghanistan, dị ka ndị dọkịta na ndị injinia.
Mujahid kwuru na ndị isi Taliban akwadoghị ikwe ka ndị Afghanistan pụọ, mana kwughachiri na a ga -akpọpụ ndị mba ọzọ niile. Afghanistan ka ọ na -erule Ọgọstụ 31 ma nwee ike ịga n'ihu na -eji ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai ruo oge a kara aka.
Mujahid kwukwara ọnọdụ ọgba aghara dị n'ọdụ ụgbọ elu dị ka ihe kpatara ndị Afghanistan iji zere ya. O kwuru na igwe mmadụ gbara gburugburu ọdụ ụgbọ elu isi obodo ahụ kwesịrị ịlaghachi n'ụlọ ha, na -ekwu na a ga -ekwe nkwa nchekwa ha.
N'otu akwụkwọ akụkọ a, Mujahid kwuru na ndị mmadụ nwere ike nọrọ na Afghanistan ma kwe nkwa na agaghị enwe mmegwara. O kwuru na ndị Taliban echefuru esemokwu n'oge gara aga, na ha ga -ahapụkwa ihe gafee.
O gosikwara na ndị Taliban ekwenyeghị ịgbatị oge ngwụcha August 31 nke US setịpụrụ iji mechaa mwepụ ha na Afghanistan.